Ka noqoshada Kaamirada: Nidaam Dolly ah oo loogu talagalay iPhone-kaaga ama DSLR | Martech Zone
Ka noqoshada Kaamirada: Nidaamka Dolly ee loogu talagalay iPhone-kaaga ama DSLR
Talaado, Agoosto 6, 2013 Monday, August 5, 2013 Douglas Karr
Waxaan ka qornay qalabka duubista fiidiyowga ee aasaasiga ah ganacsi kasta waa inuu lahaadaa haddii ay doonayaan inay u duubaan fiidiyowyo tayo leh ganacsigooda. Haddii aad waligaa daawato fiidiyowga tayada leh ee istuudiyaha, in kastoo, waxaad dareentay nidaamyada raadraaca iyo dusha sare ee ay gashadaan si ay u bixiyaan muuqaallo moobiil gaar ah oo siman.
$ 99, hadda waad heli kartaa Revolve Camera Dolly nidaamka DSLR-kaaga ama $ 139, taleefankaaga casriga ah. Waa kuwan muuqaalka guud ee badeecada iyo nooca tallaalada aad awood u yeelan karto inaad sameyso. Waxay leeyihiin qalab aad u yar - xitaa waxay leeyihiin nidaam raad raac ah oo aad ku dari karto!
Sida laga soo xigtay Ka noqoshada Kaamirada goobta:
Revolve camera dolly waa barxad lagu soo qaado muuqaalo muuqaal siman oo firfircoon. Nidaamkani wuxuu abuuri karaa noocyo kala duwan oo tallaal dabagal ah ah iyo tallaallo goos goos ah iyo sidoo kale waqti lumis firfircoon iyo joojinta sawir qaadista dhaqdhaqaaqa. Waxay ku habboon tahay kamarad kasta, waxayna ku habboon tahay in lagu isticmaalo dhammaan dusha sare iyo goob kasta.
Wareegyada la isku hagaajin karo waxay u oggolaanayaan dolly inay ku socoto saf toosan, ama qaanso wareega ah xagal kasta. Nidaamka waxaa ku jira xirmo tareen oo u oggolaanaya dollyda in loo isticmaalo goob kasta si looga helo fiidiyoow siman xitaa dhul qallafsan. Kudar dhuumahaaga / ulahaaga si aad u sameysid jaangooyo dherer ah! Xadhig kasta oo tareen ah ayaa lagu xirayaa si loo aqbalo buudhiga safarka si aad ugu adeegsan karto biraha dherer kasta, ama aad u abuuri karto qallooca ama aad udegi karto muuqaalada isdabajoogga.
Kalandarka Suuqgeynta ee 2013